Tora Knotice! Kuvhara iyo Yekushambadzira Technology Mipata | Martech Zone
Tora Knotice! Kuvhara iyo Yekushambadzira Technology Mapaza
China, April 3, 2008 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
In 2006, Ini ndinogona kunge ndaive ndisati ndakurumidza pandakafungidzira kuti 2007 raizove gore remifananidzo yemushandisi yekubatanidza. Izvo chaizvo hazvina kuenda zvakanyanya, asi mamwe makambani ainyatso shanda pazviri!
For 2008, ndakafanotaura mamwe 'madiki' marongero - kusanganisira kushambadzira kweemail. ExactTarget, semuenzaniso, anga achangobva kuzivisa zvakarongwa kusunungurwa kwemapeji ekumhara. Mamwe makambani ari kutora zvishoma mberi, zvakadaro!
Knotice inogona kunge iri fungidziro yangu!
Vhiki rino, ndakave nemufaro mukutaura naBrian Deagan, CEO we Knotice. Ndakambotaura pamusoro pekuti zvakaoma sei kune vashambadziri kuti vagadzire kuita zano pavanotengesa. "Batch uye blast" ndiyo yakajairwa nekuti nguva yese inoitwa mukuitwa chaiko kweemail pane kugadzirira. Zvakakosha kwazvo kuti kambani ibudise mushandirapamwe pa 'zuva' zvekuti vanofuratira kana mushandirapamwe wacho waive wakakodzera uye waizosangana nezvinotarisirwa nevaverengi.
Kubva 2003, Knotice anga achishanda chinyararire pakuvhara iyo gap! Knotice yakabatanidza email, kushambadzira nhare, mapeji ewebhu, analytic data, ongororo uye mazwi ekutsvaga ekushandisa kutaurirana kwakanangana zvose masvikiro. Panzvimbo peku'redza nedynamite ', Knotice inoisa chirauro chakakodzera munzvimbo chaidzo!
Muenzaniso weMult-Stage Kushambadzira
Ini ndinotsvaga Google kune lens yemwanasikana wangu Nikon D40 uye ndinopedzisira ndave pawebhusaiti. Analytics ichapa mazwi ekutsvaga andakashandisa kusvika kune saiti. Kana ikakwidziridzwa, webhusaiti yacho zvino yaizoziva kuti ndine Nikon D40.
Zvino - apo ini dzokera kune saiti kana - kunyangwe zvirinani - mu e izvo zvandinonyorera kune ino saiti, ini ndinowana zvinoenderana zvigadzirwa zvinopihwa zvine chekuita neNikon D40 kubva zvino zvichienda mberi. Zvichida ini ndinopindura mibvunzo mishoma pane imwe ongororo nezve kufarira kwangu kutora mifananidzo, uye zvirimo zvakanangiswa zvakatowanda kupinda mumamiriro epasirese, chimiro, kana michina yekutora mifananidzo, mabhuku, uye maDVD.
Heano blurb kubva Knotice papuratifomu yavo yeConcentri:
Kubudikidza nepuratifomu yedu Concentri, tinopa nzira yakapusa uye ine simba yekugadzira nekugadzirisa zvine chekuita, nhanho-nhanho kutaurirana pane email, nhare, uye newebhu chiteshi. NaConcentri, vatengesi vanogona nyore kubatanidza vatengi vemadhijitari nhasi kuti vawedzere mari, nepo vachichengetedza ruzivo rwechigadzirwa, kugadziridza mashandiro ekushambadzira, uye kubvisa mari isingachadiwi. Uye nekuti inoendeswa pane-inoda, vatengesi vanobhadhara chete izvo zvavanoda.
Zvakanakisisa pane zvese, Knotice haisi kuda kuti zvese zviitwe uye kumhanya kubva pawebhusaiti yavo. Ivo vane yakasimba Web Service uye yavo yakasarudzika yezvinyorwa zvinopihwa zvinogona kuiswa mune yako webhusaiti - kungave kuburikidza ne div kana iframe. Simba!
Zvinotaridza kuti Knotice iri kumberi mumugwagwa kupfuura mamwe makambani munzvimbo ino. Akawanda webhu, analytics uye vanopa rubatsiro emaimeri vakabatikana zvakanyanya nekukwikwidza uye nesilos yavo, vari kukanganwa nyaya chaiyo - mabhizinesi ari kushandisa nguva yakawandisa, simba, uye mari kubatanidza zvese izvi mhinduro kuti vawane mhinduro.
Ndinotarisira kuona zvakawanda kubva kuKnotice!
Ndiri weCisco I-Prize Finalist - Ndokumbirawo utsigire Idea yedu
Apr 4, 2008 pa 11: 45 AM
Unoda huru isingadhuri lenzi yeNikon D40? Sigma ine 17-35mm f / 2.8-4 iyo iwe yaunogona kuwana kubva kuCameta kuenda kuAmazon kwe $ 240. Ndiyo chete f / 2.8 lens ine yakavakirwa-mukati inotarisa mota mota iyo iyo D40 inoda kuti autofocus pasi pe $ 1000, uye ndanga ndichifara chaizvo neyangu.
Mazhinji emifananidzo yangu ichangoburwa yakatorwa neilensi iyoyo. Semuyenzaniso.
Se parutivi, ini handisi kuzoshandisa iyo D40 kana iyo lensi zvakanyanya sezvo iyi mifananidzo, yakatorwa neiyo D40 uye yangu Sigma 17-35mm f / 2.8-4 lens inoratidza nei! 🙂